ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ အိုက်တင်ေ ပါင်းစုံကို လုပ်ကာ ချစ်ဖို့ကောင်းနေ တဲ့ မြင့်မြတ်သားလေး မြတ်သူ – XB Media Myanmar
ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ အိုက်တင်ေ ပါင်းစုံကို လုပ်ကာ ချစ်ဖို့ကောင်းနေ တဲ့ မြင့်မြတ်သားလေး မြတ်သူ
နိုင်ငံကျော် မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသား မြင့်မြတ်ကိုတော့ Cele Connections ပရိ သတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ မြင့်မြတ်ကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အကယ်ဒမီ မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ေ ပမယ့် နိမ့်ချနေတတ်ပြီး ပရဟိတနဲ့ အလှူအတန်းတွေကို ရက်ရောစွာ လှူဒါန်းတတ်သူပါ.။
မြင့်မြတ်ကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးမြတ်သူ၊ ချစ်ဇနီးချောလေးတို့နဲ့အတူ ပျော် ရွှင်ေ အးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေ သူပြဲ ဖစ်ပါတယ်.။ သားလေး မြတ်သူရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေနဲ့ အိုက်တင်ပုံ စံလေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေက အချစ်တွေပို နေကြပြီး ဒီနေ့ ဇွန်လ (၂၇)ရက်နေ့မှာတော့ မြတ်သူလေးရဲ့ မျိုးစုံ အိုက်တင်ထုတ်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို “Now. ဝမ်းတူးသရီးဖိုးအက်ရှင်.. ချစ်တုန်း” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ မရိုးအောင် ဖေဖေမြင့်မြတ်ရဲ့ အိုက်တင်တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်တတ်ေ နတဲ့ မြတ်သူလေးကတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းသူလေးပါပဲနော်..ပရိသတ်ကြီး.။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြင့်မြတ်သားလေးမြတ်သူရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်.။
Source: Myint Myat’s Facebook
နိုငျငံကြျော မငျးသားတဈလကျဖွဈတဲ့ မငျးသား မွငျ့မွတျကိုတော့ Cele Connections ပရိ သတျကွီးလညျး ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျထားသူ မွငျ့မွတျကတော့ ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ အကယျဒမီ မငျးသားတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။ မငျးသားတဈလကျဖွဈေ ပမယျ့ နိမျ့ခနြတေတျပွီး ပရဟိတနဲ့ အလှူအတနျးတှကေို ရကျရောစှာ လှူဒါနျးတတျသူပါ.။
မွငျ့မွတျကတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားလေးမွတျသူ၊ ခဈြဇနီးခြောလေးတို့နဲ့အတူ ပြျော ရှငျေ အးခမျြးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျနေ သူပွဲ ဖဈပါတယျ.။ သားလေး မွတျသူရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အမူအရာလေးတှနေဲ့ အိုကျတငျပုံ စံလေးတှဟော ပရိသတျတှကေ အခဈြတှပေို နကွေပွီး ဒီနေ့ ဇှနျလ (၂၇)ရကျနမှေ့ာတော့ မွတျသူလေးရဲ့ မြိုးစုံ အိုကျတငျထုတျနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို “Now. ဝမျးတူးသရီးဖိုးအကျရှငျ.. ခဈြတုနျး” ဆိုပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။
တဈနထေ့ကျတဈနေ့ မရိုးအောငျ ဖဖေမွေငျ့မွတျရဲ့ အိုကျတငျတှအေတိုငျး လိုကျလုပျတတျေ နတဲ့ မွတျသူလေးကတော့ ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးသူလေးပါပဲနျော..ပရိသတျကွီး.။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မွငျ့မွတျသားလေးမွတျသူရဲ့ ပုံလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော.။
အသက်ငါးဆယ်နားနီးနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ငယ်ငယ်က ဟန်ပန်အမူအယာေ လးေ တွမပျောက်သေးတဲ့ ထက် ထက် မိုးဦးရဲ့ပုံရိပ်